Written By Aeimt Kabyar Mon at 8:36 AM0comments
Written By Aeimt Kabyar Mon at 5:46 AM0comments
♫♥✿*စမ်းရေနဲ့ တူတဲ့ ဘ၀♫♥✿*
စိမ်းလန်းနေတဲ့ တောတောင်ထဲက ကြည်လင်အေးမြနေတဲ့စမ်းရေ
ကို ကျွန်မတို့ က အိုးငါးလုံးစာလောက် အိမ်ကို သယ်လာပြီဆိုပါစို့ ..
(၁) ဘုရားသောက်တော်ရေကပ်ဖို့ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာထားရင်
စမ်းရေက နေ ဘုရားသောက်တော်ရေ ဖြစ်သွားတယ်...ကုသိုလ်လဲရတယ်.
(၂) လူတွေသောက်ဖို့ ရေအိုးစင်မှာထားရင် သောက်ရေ ဖြစ်သွားတယ်..ကိုယ့်အတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်
(၃)ကိုယ့်အိမ်ကမီးဖိုချောင် အိုးခွက်ပုဂံဆေးဖို့ နေရာမှာထားရင် ကိုယ့်အတွက်သုံးရေဖြစ်သွားတယ်.
(၄)အိမ်ရှေ့ လှေကားမှာထားရင် ခြေဆေးရေဖြစ်သွားတယ်..
(၅)အိမ်သာထဲမှာ သွားထားရင် အိမ်သာရေဖြစ်သွားတယ်...
ရေရဲ့ တန်ဖိုးက သူ့ နေရာနဲ့ သူ ၅ နေရာလုံး မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်.
တစ်ကယ့်တစ်ကယ်ရေငတ်တဲ့လူတွေအတွက် အသုံးဝင်တာကလူတွေသုံးတာက နံပါတ် ၁ ၂ ၃ ကရေပါ..
အခုနေ သင်ရေငတ်နေတယ်ဆိုပါစို့ သောက်ရေအိုးစင်မှာလဲရေကတစ်စက်မှမရှိဘူး.
ဘုရားသောက်တော်ရေကပ်ထားတဲ့ရေကလွဲလို့တစ်အိမ်လုံး
ရေမရှိဘူးဆိုရင်တောင် ဘုရားရှင်ကို ခွင့်တောင်းပြီး သောက်တော်ရေစွန့် တော်မူပါလို့ ပြောပြီး ပြန်သောက်လို့ ရပါတယ်..
ဘုရားသောက်တော်ရေလဲမရှိဘူး...မီးဖိုချောင်က သုံးရေ ရှိနေရင်တောင် အဲ့ဒီသုံးရေကိုပဲ သောက်လို့ ရပါသေးတယ်..
သောက်ရေလဲမရှိ သုံးရေလဲမရှိ အိမ်ရှေ့ က ခြေဆေးအိုးထဲမှာ ထားတဲ့ ရေပဲ ရှိတယ်ဆိုပါစို့ ..ရေကလဲ တော်တော်ငတ်နေပြီ
သောက်သင့် မသောက်သင့် တော်တော်လေး တွေဝေနေပေလိမ့်မယ်...တစ်ချို့ မရွံတတ်တဲ့ သူတွေတော့
သောက်ချင်သောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်..နောက်ဆုံးခြေဆေးရေလဲမရှိဘူး...အိမ်သာရေပဲ ရှိတော့တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအိမ်သာ
ရေကို သောက်နိုင်တဲ့သူတော်တော် ရှားပါလ်ိမ့်မယ်...ရွံစရာရေလို့ သတ်မှတ်ထားကြလို့ ပါ..
ရေဆိုတာ နေရာတိုင်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေပေမယ့်...ထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီး နာမည်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်..တန်ဖိုးဖြတ်
ရခဲခြင်း (၅) မျိုးထဲမှာကျွန်မတို့ လူ့ ဘ၀ဆိုတာလည်း တော်တော်လေး ရခဲလို့တော်တော်လေး တန်ဖိုးရှိပါတယ်
.. စမ်းရေကို အိမ်မှာ သုံးဖို့ငါးနေရာ ထားသလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူ့ ဘ၀ ကို ကျွန်မတို့ 
ကိုယ်တိုင် လူ့ လောက မှာ ငါးနေရာ ခွဲပြီး ထားကြည့်ရအောင်.
.(၁)သာသနာ့ဘောင်မှာ နေပြီး မြင့်မြတ်တဲ့ တရားရှာပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘ၀
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးရှိအောင်နေပြီးအများတကာကျန်းမာချမ်းသာဖို့ အများအကျိုးဆောင်တဲ့ ပရဟိတ ဘ၀
(၃) သူများအကျိုးတော့မဆောင်နိုင်ဘူး..ကိုယ့်မိသားစုတာဝန် အိမ်တွင်းအကျိုးကိုသာ ရှာတဲ့ ဘ၀
(၄) ကိုယ့်မိသားစုတာဝန်လဲ မထမ်းနိုင် အများအကျိုးလဲ မသယ်နိုင် ကိုယ်ကောင်းဖို့ ပဲ ကြည့်တဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ဘ၀
(၅) ကိုယ့်မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် အတွက်လဲ အသုံးမ၀င်..ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ ကောင်းအောင် တန်ဖိုးရှိအောင်မနေတတ်
စိတ်အလိုကိုသာလိုက်ပြီး မကောင်းမှုမှန်သမျှ လုပ်ရဲတဲ့ သူတစ်ပါးတံတွေးခွက်မှာ
အဲ့ဒီ ဘ၀တွေဟာ တစ်ကယ်တော့ သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူ့ ဘ၀ပါ.
၃၁ဘုံမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ လူ့ ဘ၀ကြီးပါ.ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အတွေးအခေါ် ခံယူချက်တွေ အယူအဆတွေက
ကိုယ့်ကိုယ် ဘယ်လို လူမျိုးလဲဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်ပြီး တန်ဖိုးသတ်မှတ်လိုက်တာပါ..
..မွေးကတည်းကလူကောင်းဖြစ်စေ သူယုတ်မာဖြစ်စေလို့ပါလာတာမဟုတ်ပါဘူး.
ကိုယ့်ဘ၀ကို အလင်းပေးနိုင်တာ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ..ကိုယ့်ဘ၀ကို အမှောင်ချနိုင်တာလဲ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ..
ကိုယ့်ဘ၀ အေးမြစေတာလဲ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ ကိုယ့်ဘ၀ ပူလောင်စေတာလဲ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ..
"Every People have their own Price" လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုး ရှိပါတယ်..အဲ့ဒီတန်ဖိုးကို နေရာမှန်အောင်ကိုယ်တိုင်
ထားတတ်ဖို့ ပဲ လိုပါတယ်..နော်....
အားလုံး ကိုယ်ပိုင်အလင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးမြှင့်နိုင်ပြီး စမ်းရေလိုထာဝရအေးမြပါစေလို့ ဆုတောင်းလျှက်
Written By..ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) 12:31PM(24.9.2013)
Written By Aeimt Kabyar Mon at 10:52 AM0comments
Written By Aeimt Kabyar Mon at 2:13 AM3comments
Written By Aeimt Kabyar Mon at 12:08 PM0comments
တရုတ်ဘုံကျောင်းက ဘုရားလဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်..ဘုရားတစ်ခါသွားဖို့ 
ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခါရောက်ဖို့ တော်တော်လေးကို ဝေးပါတယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံချင်းအတူတူ ဘုရားကျောင်းကန်
စေတီပုထိုးတွေမြန်မာပြည်ထက်စာရင် တော်တော်လေးကို နည်းတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ချမ်းချမ်းတို့ မြန်မာပြည်မှာဆို ခရီးသွားတိုင်း ကုသိုလ်ယူနိုင်တဲ့ ကြည်ညိုစရာ စေတိပုထိုးတွေများလွန်းလို့ နော့...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံက ဘယ်နိုင်ငံလဲတဲ့..
ချမ်းချမ်းလဲ ခေါင်းမော့ ပြီး ဖြေလိုက်တယ်“..အဲ့ဒါ တို့့မြန်မာနိုင်ငံပဲ ” သူကတော့ မယုံဘူး
မြန်မာဆိုရင် အရမ်းအထင်သေးပါတယ်..ဆိုင်မှာအလုပ်တူတူလုပ်တဲ့သူငယ်ချင်း ၇ ယောက်ထဲမှာ နှစ်ယောက်က မြန်မာ
တွေကို အထင်သေးတယ် နှိမ်တယ် ကျန်တဲ့ ငါးယောက်က နားလည်မှု၇ှိတယ် စိတ်ကောင်းရှိတယ်..မြန်မာတွေကို နှိမ်တဲ့
အားအားနေ ဘုရင့်နောင် အလောင်းဘုရားမကောင်းကြောင်းပဲ ပြောနေတော့တာပဲ..တစ်ချိန်က မြန်မာတွေ
ကျွန်မကလဲ ကိုယ့်မြန်မာဘုရင်တွေစခဲ့တာမို့ ဘာမှပြန်မပြောဘူး..ငြိမ်နေလိုက်တယ် စိတ်ထဲမှာတော့ ငါ့အလှည့် တော့တစ်နေ့ 
ရောက်ဦးမှာလို့ တွေးနေလိုက်တယ်.မထင်မှတ်ပဲသူက “ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံက ဘယ်နိုင်ငံလဲတဲ့.”
ချမ်းချမ်းကလဲ ဒီတစ်ခါတော့သူတို့ ကိုကျောဖို့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ပြီမို့ .သေသေချာချာကိုဖြေပေးလိုက်တယ်..
နင်တို့ အထင်သေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထေရ၀ါဒသာသာနာ အထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံ ရတနာသုံးပါးကို အကြည်ညိုဆုံးနိုင်ငံလို့ .ဖြေလိုက်တယ်..ဘာလို့ လဲဆိုတော့
တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရတနာသုံးပါးကို နင်တို့ ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားတယ်..နင်တို့ နိုင်ငံမှာ အိမ်တိုင်း လိုလို ဘုရားကျောင်း
ဆောင်မ၇ှိဘူး..နတ်စင်တော့ အိမ်တိုင်းရှိတယ်..ဥပုဒ်နေ့ တိုင်း နင်တို့ တွေပန်းဝယ်ပြီး ဘုရားကိုမကပ်ဘူး.နတ်စင်
ကိုကပ်တယ်..သရဲတွေကို ကန်တော့တယ်.သရဲကို ကယ်တင်ရှင်လို့ ထင်တယ်..အောက်လမ်းတွေ တအားများတယ်..
အဲ့ဒါတွေကို စစ်မှန်တဲ့ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမလုပ်ဘူး..စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ရတနာသုံးပါးက လွဲရင်
တခြားဘာကိုမှ မကိုးကွယ်ဘူး...နတ်တွေသရဲတွေကို မေတ္တာပို့ တာပဲရှိတယ်..မကိုးကွယ်ဘူး..လို့ ပြောလိုက်ရော
သူ ငယ်ချင်းက ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး..
့မြန်မာအမျိုးသမီး ဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်လောက်က အိပ်ရာဝင်ဘုရား၇ှိခိုး ပါတယ်..သရဏဂုံသုံးပါး သံဗုဒ္ဓေ သြကာသ
ကန်တော့တာရွတ်တတ်ပေမယ့် ထိုင်းအမျိုးသမီး ဆယ်ယောက်မှာ ၇ ယောက်လောက်
..ဆိုင်နားက လမ်းဆုံမှာ ကုလားဘုရား ဆင်နှာမောင်းနဲ့ ဂနက် ဘုရားမှာဆိုရင် ညညဘက်လူတွေတအားများတယ်.
ချမ်းချမ်းတို့ ဆီမှာ ကာလီမယ်တော်တို့ဂနက်ဘုရားတို့ ကို ဟိန္ဒူတွေပဲသွားတာများတယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသွား
တာနည်းတယ်။ဒီမှာက ဟိန္ဒူတွေမသွားဘူး..ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ တရုတ်စပ်တွေသွားတာများတယ်..
သွားဆုတောင်းကြတာတဲ့..ဆုတောင်းပြည့်တယ်ပြောပြီး သူတို့ တွေတစ်လတစ်ခါသွားဆုတောင်းပါတယ်..ချမ်းချမ်းက
အဖော်အမြဲလိုက်သွားနေကျ..သူတို ကမေးတယ် ဘာလို့ ဆုမတောင်းတာလဲလို့ ဆိုတော့ ငါဆုတောင်းပြီး အလုပ်မလုပ်
ရင် အဲ့ဒီဘုရားက ဖြည့်ပေးမှာလား လို့ ပြန်ပြောတော့ လူ့ ဂွစာတဲ့..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို သူတို့ က အထင်
သေးချင် သေးမယ့် သူတို့ ထက်သာတာတွေ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အများကြီးပဲ.ရတနာသုံးပါးကြည်ညိုတာ အလုပ် ကြိုးစားတာ ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတာ သူတို့ ထက်သာတယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်...
နောက်ကြုံမှ သူတို့ နိုင်ငံအကြောင်းပြောပြမယ်..ပြောများ၇င်အတင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ ဆက်မပြောချင်တော့ဘူး.
ပထမဦးဆုံး (၁၁.၄.၂၀၁၃) ရက်နေ့ က မွေးနေ့ အတွက်ရည်စူးပြီး ဘုရားသွားတဲ့အလျှုကို အရင်မျှပေးမယ်နော်....
ဘုရား၊ရိပ်သာဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တိုင်း ပထမဦးဆုံး ဘုရား၇ှိခိုး ငါးပါးသီလယူပါတယ်..
ဘုရား၇ှိခိုးပြီးရင် အလှုခံပုံးတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် လျှုပါတယ်..ဒါက ကြွေပြား နဲ့ခေါင်းမိုးအတွက်လျှုတာပါ..သူတို့ ဆီမှာ အလျှုခံမ၇ှိဘူး..စေတနာ၇ှိသလောက် ရေးပြီး အလျှုခံပုံးထဲမှာ ထည့်ရုံပါပဲ..
ဒါကသံဃာတော်တွေ ဆွမ်းလျှုဖို့ ကိုရင်လေးတွေက အလျှုခံတာပါ..သပိတ်ထဲကို ပိုက်ဆံထည့်တာနဲ့ဆုတောင်းသံက အလိုလိုထွက်လာပါတယ်..ကလေးတွေအကြိုက်ပေါ့..
ဒီအခေါင်းကတော့ အိပ်ဖို့အဲ မဟုတ်ဘူး..ပိုင်၇ှင်မဲ့ အလောင်းတွေကို အခမဲ့ မီးသင်္ဂြဟ် ဖို့ အလျှုခံတာပါ.ပိုက်ဆံကိုတော့ အခေါင်းထဲထည့်ပါတယ်
ဒါက သေခါနီးဆဲဆဲ နွားလေးတွေကို ဘေးမဲ့ပေးဖို့ ဝယ်ထားတာပါ..အလျှုရှင်တွေက ကိုယ်နိုင်သလောက်
စာ၇ွက်မှာ ရေးပြီး ပိုက်ဆံကို အလျှုခံပုံးထဲထည့်ပါတယ်..အလျှုခံပုဂ္ဂိုလ် မ၇ှိပါဘူး..
ပြီးတာနဲ့ တရုတ်ဘုံကျောင်းက အရေးပေါ် နာရေးကူညီမှုအသင်း နဲ့ ပိုင်၇ှင်မဲ့အလောင်းမီးသဂြိုဟ်ပေးတဲ့ အသင်းမှာ အလျှုငွေထည့်ပါတယ်..ရုံးပိတ်ရက်မို့ လူတအားများတယ်..လျှုဖို့ တန်းတောင်စီရတယ်..
အလျှုငွေထည့်ပြီးရင် ဖြတ်ပိုင်းလေးကို ကော်နဲ့ ကပ်ပြီး အခေါင်းမှာ ကပ်ရပါတယ်..
သင်္ကြန်တွင်း ၁၃.၄.၂၀၁၃ ရက်နေ့ မှာ သွားတာက မနှစ်က သွားနေကျဘုန်းကြီးကျောင်းပါပဲ..မြို့ ပြင်မှာဆိုတော့ ဆင်းရဲတဲ့ ကျောင်းလို့ ပြောရမှာပေါ့..အသိအိမ်နဲ့ နီးလို့ 
ချမ်းချမ်းအဲ့ဒီကျောင်းကို တစ်နှစ်ကို ၀ါတွင်းတစ်ခါ သင်္ကြင်္န်တွင်းတစ်ခါ အမြဲသွားဖြစ်ပါတယ်..သွားတိုင်း ကုဋီဆေး ကျောင်းတံမျက်စည်းလှဲ သန့် ရှင်းရေးလုပ်နေကြဆိုတော့
ဆ၇ာတော်က မှတ်မိနေပြီ...သူတို့ ထိုင်းလူမျိူးတွေက ရွံလို့တစ်ခါမှ ကုဋီလာမဆေးဖူးပါဘူးတဲ့.
အခုလိုမြန်မာတစ်ယောက်က လာဆေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့..တစ်ချို့ တွေက အိမ်သာကို ရွံစရာလို့ 
ထင်ကြတယ် ကျွန်မကတော့ ၇ွံစရာမထင်ဘူး..ကိုယ့်ဒုက္ခကို ကုညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်လို့ ထင်တယ်..
ရွံစရာကောင်းတာက အိမ်သာကို သုံးပြီး စည်းကမ်းမ၇ှိတာက ၇ွံစရာကောင်းတာ..နော့်
တံမျက်စည်းလှည်းပြီးတော့ ဘော်ဒါတွေကို မုန့် ကျွေးပါတယ်...
ငါးစာရောင်းတဲ့သူမ၇ှိပါဘူး ငါးစာရဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်း အလျှုခံပုံးထဲထည့်လိုက်ယုံပဲ...
ငါးလဲစား ကိုယ်လဲစား..အတူတူစားလို့ ရပါတယ်..:D
ငါးစာကျွေးပြီးတော့ ပြုသမျှကုသိုလ်ကို အားလုံးရကြပါစေအမျှပေးဝေပါတယ်..
ချမ်းချမ်းပြုသမျှကုသိုလ်အဖို့ ဘာဂကို သုံးဆယ့်တစ်ဘုံအလုံးစုံသတ္တ၀ါများနဲ့ စာချစ်သူများအား အမျှပေးဝေပါတယ် ..ထပ်တူထပ်မျှ အမျှရကြပြီး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ..အမျှ..အမျှ..အမျှ..ယူတော်မူကြပါကုန်တော်...သာဓု..သာဓု..သာဓု...
Written By Aeimt Kabyar Mon at 2:24 PM2comments
မှုခင်းသတင်းလေးတစ်ခုကြားပြီးကတည်းက ရင်ထဲတော်တော်လေးမကောင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ကို ရင်ဖွင့်တာပါ...
မြန်မာလူမျိုး နှစ်ယောက် တစ်ယောက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ယောကျာ်းလေး.. မိန်းကလေး
နာမည်က နန်းဝင်း လို့ သူတို့ ခေါ်ကြပါတယ်..သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးက ဈေးထဲမှာ လှည့်ပြီး ပစ္စည်းတွေ
ငွေတွေဖုန်းတွေ လစ်ရင်လစ်သလို ခိုးနေတာ..တစ်နေ့ တော့ သူတို့ လုပ်ရပ်တွေကို ပတ်ဝန်းကျင်မြန်မာတစ်ယောက်က ရိပ်မိပြီး ရဲကို အကြောင်းကြား
ပါတယ်..တိုင်တဲ့သူက ဘာလို့ တိုင်ရလည်းဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး သိက္ခာကျမှာ မလိုလားလို့ ပါတဲ့..သူတို့ လိုအကျင့်ပျက်မြန်မာ
တွေကြောင့် တစ်ကယ်ရိုးသား ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာတွေလည်း သိက္ခာကျပါတယ်.နိုင်ငံလည်း သိက္ခာကျပါတယ် လို့ သတင်းပေးတဲ့ အစ်မကြီးက
..လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကျော်ကလည်း..ဈေးထဲမှာဈေးရောင်းနေတဲ့ ကရင်မလေးတစ်ယောက်
အသက်က ၁၈ နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး..သူ့ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ အတွင်းပစ္စည်း ရွှေတွေ၁၀ ကျပ်သားလောက် ခိုးပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်.
.ပြန်ဖမ်းမိတဲ့ အချိန်မှာ ကရင်မလေးက သူ ခိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကုန်သွားပြီ.လို့ ပြန်ပြောတော့ သူ့ သူဌေးက
ဒီသူခိုးမကို မြန်မာပြည် ပြန်ပို့ လိုက်လို့ ပဲ စိတ်တိုတိုနဲ့ ပြောပါတယ်.ထောင်လဲမချလိုက်ပါဘူး..မြန်မာပြည်ပဲ ပြန်ပို့ လိုက်ပါတယ်.
နောက်တစ်မှုကတော့ အိမ်ဖော်လုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့ ချစ်သူ နဲ့ ပေါင်းပြီး အိမ်ရှင်အပျိုကြီး.ဖြစ်တဲ့ ရဲမေကို သတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေခိုး
ပြီးထွက်ပြေးတာ ရဲတွေလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာ ယောကျာ်းလေးက လွတ်ပြီး မိန်းကလေးက မိသွားပါတယ်..
နောက်အမှူကတော့ ကရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသက်က ၃၅ လောက်၇ှိပါပြီ..ထိုင်းမှာအနေကြာတော့ ထိုင်းမှတ်ပုံတင်တောင် ရထားပါပြီ..မြန်မာမှတ်ပုံတင်လည်း
၇ှိပါတယ်..ကိုယ်တော်က နေ့ လည်ဘက် ကျောင်းထဲမှာနေပြီး ညဘက်မှာ သင်္ကန်းချွတ် အကျီ င်္ဝတ်အပြင်ထွက်ပြီး မိန်းမပျက်တွေနဲ့ ပျော်ပါတယ်..
အဲ့ဒီလိုနေတာကြာတော့ မိန်းမပျက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးသွားလို့သင်္ကန်းတောင်မချွတ်တော့ပါဘူး..ညဘက် တောင် ထွက်ပြီး အပျော်ရှာပါတယ်..ပတ်ဝန်းကျင်က
သတိထားမိတော့ ရဲကို အကြောင်းကြားပါတယ်..ရဲက မိန်းမပျက်ကိုအရင်မေးပါတယ်..ညဘက်ဘုန်းကြီး လာတာ တစ်ကယ်ဟုတ်မဟုတ်
မိန်းမပျက်ကလည်း ၀န်ခံပါတယ်။။ အဲ့ဒီနောက် ရဲက မိန်းမပျက်ကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်.အကျင့်ပျက် အယောင်ဆောင် အချောင်ဘုန်းကြီးကို ဖမ်းတာ ကူညီ
ပေးဖို့ ပေါ့၊၊ မိန်းမပျက် နေတဲ့ အိမ်မှာ ရဲတွေက လျှို့ ဝှက်ကင်မရာ တပ်ထားပါတယ်..ညဘက် ဘုန်းကြီးရောက်ပြီး အိမ်ထဲကို ၀င် ပြီး မိန်းမပျက်နဲ့ ဈေးညှိနေတဲ့
အချိန်မှာ အပြင်က အသင့်စောင့်နေတဲ့ ၇ဲတွေက ၀င်ပြီး ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အကျင့်ပျက် အချောင်နေအချောင်စားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကြောင့် တစ်ကယ် ကိုယ်ကျင့်တရားထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ တခြား သံဃာတော်တွေ
ဂုဏ်ညှိုးပါတယ်..သာသနာ ညှိုးပါတယ်.။အဲ့ဒီလို အကျင့်ပျက် ဘုန်းကြီးတွေများလာလေ..လူတွေက င်္သဃာတော်တွေကို အရိုအသေ နည်းလာလေပါပဲ..
သံဃာ့ဂုဏ်ညှိးတာ မတွေးမိကြဘူးလား မသိဘူးနော် ကိုယ့်အတွက်လဲ အကျိုးမ၇ှိ ..သာသနာအတွက်လဲ အကျိုးမရှိ.ပါဘူး..
နောက်သတင်းတွေကတော့..မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ထိုင်းနဲ့ တရုတ်မှာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်ရောင်းစားခံရတာ..ကလေးတွေ ရောင်းစားခံရတာ
သေချာတွေးကြည့်ရင် မြန်မာပြည်က လူတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ရောင်းစားခံရတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားတွေက လာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးပါဘူး..
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကပဲ သွားရောင်းတာပါ..ကိုယ့်ထမင်းတစ်ဝမ်းဝဖို့ကိုယ့်လူမျိုး
..ပြန်ရောင်းရဲတဲ့ လူတွေကို ကျွန်မတော်တော် အံ့သြတယ်..
.ဒီသတင်းကို ကျွန်မ ဘာလို့ ပြောပြနေရလဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရေမြေခြားမှာနေရတဲ့အခါ..
ကျွန်မတို့ ရဲ့ အပြုအမူအကောင်းအဆိုးမှန်သမျှ ကျွန်မတို့ ချစ်တဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး နဲ့ 
အမျိုး ဘာသာ သာသနာလဲ ထပ်တူထပ်မှ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးခံစားနေရပါတယ်.
.ကျွန်မတို့ မကောင်းတာ လုပ်ရင် ကျွန်မတို့ ကို သူများနိုင်ငံကလူတွေက အမေပေးတဲ့နာမည်မတပ်ပါဘူး..
မြန်မာပြည်မှာမွေးခဲ့လို့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့ နာမည်ပဲတပ်ပါတယ်..မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုး ၈ မျိုးရှိတာလဲ သူတို့ မသိဘူး..
သူတို့ သိတာ မြန်မာပြည်က လာရင် မြန်မာပါပဲ..စဉ်းစားကြည့်လေ တော်တော် ၀မ်းနည်းရလေပဲ..
အခုလဲ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကမ္ဘာအနှံ့ မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ခါ..အထူးသတိထားရမှာက
ကိုယ့် အမိနိုင်ငံတော် ဂုဏ်မညှိုးအေင် ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သိက္ခာကို အပျက်မခံပါနဲ့ လား..မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သူခိုးမျိုး..၊ _ါသည်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး..
ကိုယ့်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာလူမျိုး သူများအထင်သေးတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ ..ကိုယ့်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စည်းစိမ်တွေပုံပြီး ပေးကမ်းမှ စောင့်ရှောက်
ကာကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး...ကိုယ့်၇ဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုး၇ှိအောင်နေရင်ပဲ..လုံလောက်ပါပြီ..
ကျွန်မတို့ ဘိုးဘွားတွေ တစ်ချိန်တုန်းက ကြွေးကြော်ခဲ့တာ *** သခင်မျိုးဟေ့ တို့ ဗမာ.*** .ဆိုတဲ့ စကားပါ..
***သူခိုးမျိုးဟေ့...တို့ ဗမာ.***...***လူလိမ်မျိုးဟေ့ တို့ ဗမာ***... *** _ါသည်မျိုးဟေ့ တို့ ဗမာ *** မဟုတ်ပါဘူးနော်...
***ငါးခုတ်မတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ် ***တယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ လူတွေရဲ့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတဲ့ အတွေးကြောင့်လား..မသန့် ရှင်းတဲ့ ငါးခုတ်မက
ကိုယ့်တစ်ကောင်ကြောင့် အများပါ ပုတ်မယ်ဆိုတာ မတွေးမိလို့ လားဟင်..:( :(
Written..By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) http://www.haymonchan.blogspot.com
Written By Aeimt Kabyar Mon at 2:30 PM 1 comments
***လူ့ အလို နတ်မလိုက်နိုင်***ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးလို ကျွန်မတို့ လူသားတွေရဲ့ လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ တက်မက်နှစ်သက်မှုတွေ.
.ဖြစ်ချင်တာတွေ အားလုံးကို ဖြည့်ပေးမယ့် သူရှိရင်တောင် လိုချင်တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ က ကုန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး..
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ နည်းပညာပိုင်းတွေကတစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ 
အရမ်းတိုးတက်ခေတ်မှီလာပါပြီ.ဥပမာ တီဗွီ..ကက်ဆက် ..ဖုန်းတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေ ဆိုလဲ တစ်လထက်တလ
ပိုပိုပြီး ဆန်းသလာသလို လူတွေအတွက် ပိုပိုပြီး လိုချင်စရာကောင်းလောက်အောင် တီထွင်နိုင်ကြပါတယ်...
လူ့ အလို ကိုသာ နတ်တွေမလိုက်နိုင်တာ လူတွေအကြိုက် နည်းပညာက အမျိုးမျိုး တီထွင်နိုင်ပါတယ်...
အဘိုးအဘွားတို့ ခေတ်တုန်းက ဘာမှ သေးမ၇ှိတော့ ဘာမှမလိုချင်ကြဘူး...၇ှိတာလေးနဲ့ 
ရောင့်၇ဲတင်းတိမ်ပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ၇ှိတာလေး မျှဝေပေးရင်း ဘ၀ကိုအေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းနိုင်ပေမယ့်.ကျွန်မတို့ ခေတ်မှာ
တော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတော့ အဲ့ဒီအရာတွေ တက်မက်စိတ် လိုချင်စိတ်တွေနဲ့ဟုတ်တာတွေရော မဟုတ်
တာတွေရော ရရာနည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တာ ရဖို့မနားမနေ၇ှာဖွေရပါတယ်..
ရပြီးရင်ရော နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ အသစ်လေးတွေ သူများဝယ်သလို ၀ယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ 
ကိုယ့်ဘ၀ မီးပုံထဲ တိုးလို့ တိုးမှန်းမသိ ဖြစ်ကြရပါတယ်...
လူတိုင်းတော့ ဘ၀မှာ ကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစားချင်ကြတာပဲ..ဒါပေမယ့် လူတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို ကိုယ်နေချင်
သလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါ..လောကကြီးကို မတရားဘူးလို့ အပြစ်မြင်ကြမယ်..ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ အလိုမကျဖြစ်လာမယ်.
ကိုယ့်မိဘတွေကိုလဲ ဆင်းရဲလိုက်တာ လို့ အပြစ်မြင်ကြမယ်...
ကိုယ်လိုချင်တာတွေမရလို့ငါသိပ်ကံဆိုးတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထင်မိခဲ့ရင်...
အောက်က ဗွီဒီယို ဖိုင်လေးနှစ်ခုကို သေချာကြည့်ပြီး ရင် ငါသူ့ လောက်ကံမဆိုးသေးဘူး..သူ့ လိုမျိုး အဖြစ်ဆိုးတွေ
မကြုံသေးဘူးလို့ထင်လိုက်တာနဲ့သင်ဟာ သူတို့ ထက်ကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် သေချာသွားပါပြီ..
သင့်ဘ၀တန်ဖိုးကို သင်သိလာပါလိမ့်မယ်...ကျွန်မကိုယ်တိုင် စိတ်ပျက်စရာ စိတ်ညစ်စရာကြုံလာတိုင်း သီချင်းလေး ကိုပြန်ပြန်နားထောင်ရင်း သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ပြန်ပြန်ပြည့်ပြီး
တစ်ကယ်လို့ ငါ့ဘ၀ကိုသာ ငါတန်ဖိုးမထားရင် ငါဟာ သူတို့ ထက် ကံဆိုးတဲ့သူ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အသိပေးပါတယ်..
(၁) သူကတော့ သူအသက် ၂၉ နှစ်ပါ.. ကားအက်ဆီဒင့် ကြောင့် လက်တစ်ဖက် အကြောသေသွားခဲ့ပြီး
အရမ်းဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာကို စိတ်မလျော့ပဲ..၁၀ နှစ်ကျော်မနားမနေကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..
ဂစ်တာတီးကို လက်တစ်ဖက် အကြောသေသွားကတည်းက လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ တီးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်..
သူ့ ဘ၀မှာ သူ့ ကို အမြဲအားပေးတဲ့ သူက သူ့ အစ်ကို ပါ.. အခုလဲ Thailand's Got Talent 2011မှာ ၀င်ပြိုင်တဲ့အခါ အောင်မြင်မှုတစ်ခု
(၂) နောက်တစ်ယောက်က မွေးကတည်းက ခြေနှစ်ဖက်မပါခဲ့သလို လက်တစ်ဖက်လဲ အပြည့်အစုံ မပါခဲ့ပါဘူး..
သူများတွေလို ခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက် အရမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်..
Thailand's Got Talent မှာ သူများလို အင်္ဂါမပြည့်စုံပေမယ့် အရည်အချင်းကတော့ သူများထက် မန်ိမ့်ကျဘူးဆိုတာ
သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်..Thailand's Got Talent 2011 ရဲ့ Final အဆင့်တောင် ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်..
ဆုကတော့ မရလိုက်ပေမယ့် သူ့ ရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ အရည်အချင်းကတော့ တစ်ကယ် အတူယူအားကျစရာကောင်းပါတယ်..လေးစားဖို့ လဲကောင်းတယ်..သူဟာ ဒုက္ခိတ
တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ ကြောင့် သူများတွေ တာဝန်မပိုစေချင်ဘူး.ုးက္ခမရောက်စေချင်ဘူးတဲ့..ဒီခေတ်မှာ
သူများလုပ်စာ ထိုင်စားချင်တဲ့သူတွေ သူများ ကိုအားကိုးချင်တဲ့သူတွေ အတုယူသင့်ပါတယ်..
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း အခုဆို အဆိုတော်တောင် တစ်ယောက် ၇ှိခဲ့ပါပြီ...
အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အရည်အချင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုက အရေးကြီးပါတယ်..
ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့ နေရတဲ့ ဒုက္ခိတ တွေဆို၇င် တစ်ချို့ လူတွေက သိပ်ပြီး အပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်ကြသလို
သိပ်ပြီး လူရာမသွင်းကြဘူး...ခြေပြတ် လက်ပြတ်ဆိုရင် အနူ လိုပဲ သတ်မှတ်ကြပါတယ်..
သူတစ်ပါးရဲ့ အားနည်းချက်ကို လှောင်ချင် ပြောင်ချင် အထင်သေးကြပါတယ်...
မတူသလို မတန်သလို ထင်ကြပါတယ်..တစ်ကယ်တော့ သူတို့ တွေဟာ သာမန်လူတွေထက်ကို စိတ်သဘောထား
တစ်ကယ်လို့ သူ တို့ နေ၇ာမှာ ငါရဲ့ ခြေတွေ လက်တွေ ပြတ်သွားခဲ့ရင် ရော ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ 
လက်၇ှိ ကောင်းနေတဲ့ ခြေတွေက ကောင်းတဲ့ လမ်းကို များများလျှောက်သင့်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်
အသိပေးပြီး သင့်လက်တွေ ကို ကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ ကိုယ့်ကိုယ် အားပေးရင်း...မိမိသူတစ်ပါးအကျိုး
ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ရည်မှန်းချက်တွေကို သင်နဲ့ တန်သလောက်ပဲ မှန်းပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်
တော့ သင်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခု သင့်ကြိုး မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရမှာတော့ သေချာပါတယ်...
(၃)နောက်တစ်ယောက်က အသက် ၃ နှစ်ပဲ၇ှိသေးတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ကြိုးစားမှုပါ..
သူလေးက Thailand's Got Talent 2012 June လမှာ ပြိုင်ပွဲ ၀င်သွားတဲ့ ကလေးလေးပါ...
အခုခေတ်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရပြီး အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေကို လူ့ လောကထဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လက်တွဲမခေါ်ဝံ့ပဲ..ရက်ရက်စက်စက် ဖျက်ချပြစ်ရဲတဲ့ သူတွေ သင်တို့ သာ သူတို့ လေးတွေကို သတ္တရှိရှိတဲ့ လက်တွဲခေါ်ခဲ့ရင် တစ်နေ့ မှာသူတို့ လေးတွေဟာ ပရိတ်သတ်က အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်သလို လူတွေကြည်ညိုရတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးလဲ ဖြစ်နိုင်သလို နိုင်ငံတော်အတွက် အားထားရတဲ့ သူရဲကောင်းလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. သင်သာ သူတို့ လေးတွေအတွက် စံပြုထိုက်တဲ့ မိခင် ဖခင်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး သူတို့ လေးတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ပြုပြင်ဆုံးမဖို့ တော့ လိုတာပေါ့....ပန်းကလေးလှဖို့ မြေဆီသြဇာကောင်းကောင်း နဲ့ ရေမှန်မှန်လောင်းဖို့ လိုသလိုပေါ့...
လောကကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိဘူး မဖြစ်သေးတာပဲ ၇ှိတယ်ဆိုတာ သေချာသွားပြီ..
Written..By ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) 01:32 AM ....5:7:2012
Written By Aeimt Kabyar Mon at 9:53 AM3comments
Written By Aeimt Kabyar Mon at 1:19 PM5comments